शिपिंग नीति होलसेल_स्टार_एक्सएनयूएमएक्स
हामी अन्तर्राष्ट्रिय शिपिंग सेवाहरू प्रस्ताव गर्ने गर्व गर्यौं जुन वर्तमानमा 200 भन्दा बढी देशहरू र विश्वव्यापी द्वीपहरूमा व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्दछ। केहि पनि हाम्रो ग्राहकहरु लाई महान मूल्य र सेवा ल्याउन भन्दा बढी हामीलाई मतलब छ। हामी विश्वभर जहाँ पनि सबै आशा भन्दा बाहिर एक सेवा वितरित हाम्रो सबै ग्राहकहरु को आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्न को लागी जारी रहनेछ।
तपाईं प्याकेजहरू कसरी जहाज गर्छन्?
चीन मा हाम्रो गोदाम देखि प्याकेजहरू ePacket वा ईएमएस उत्पादन को वजन र आकार आधारमा द्वारा पठाइएको गरिनेछ। हाम्रो अमेरिकी गोदाम देखि पठाइएको प्याकेजहरू USPS मार्फत पठाइएको छन्।
तपाईं विश्वव्यापी जहाज गर्छन्?
हो। हामी संसारभर 200 देशहरु लाई निःशुल्क शिपिंग प्रदान गर्दछौं। यद्यपि त्यहाँ केहि स्थानहरू छन् जुन हामी जहाजमा पठाउन असमर्थ छौं। यदि तपाईं ती मध्ये कुनै एकमा अवस्थित हुनुभयो भने हामी तपाईंलाई सम्पर्क गर्नेछौं।
के भन्सार बारेमा?
हामी एक पटक आइटम पठाइएको छ कुनै पनि अनुकूल शुल्क लागि जिम्मेवार छैनन्। हाम्रो उत्पादनहरु खरिद गरेर, तपाईं एक वा बढी प्याकेजहरू तपाईँलाई पठाइएको हुन सक्छ कि सहमति र तिनीहरूले आफ्नो देश आइपुग्दा अनुकूलन शुल्क प्राप्त गर्न सक्छ।
ढुवानी कहिलेसम्म ले?
सबै आदेशहरु 36 व्यापारिक घण्टा भित्र पठाईएको छ। डिलिवरीहरूले 7-20 व्यापारिक दिन लिन्छन् र दुर्लभ अवस्थामा 30 + व्यापारिक दिन।
तपाईँलाई ट्र्याकिङ जानकारी प्रदान गर्छन्?
हो, एकचोटि तपाईंले एक ईमेल प्राप्त गर्नुहुनेछ तपाईंको अर्डर शिप्स जसमा तपाईंको ट्र्याकिंग जानकारी समावेश गर्दछ, तर कहिलेकाँही नि: शुल्क शिपिंग ट्र्याकिंग उपलब्ध हुँदैन।
मेरो ट्रयाकिङ "कुनै जानकारी क्षणमा उपलब्ध" भन्छन्।
केहि शिपिंग कम्पनीहरूको लागि, यसले 2-5 व्यापार दिन लिन सक्छ प्रणाली मा ट्र्याकिंग जानकारी अपडेट गर्न।
मेरो वस्तुहरू एक प्याकेजमा पठाइने?
तार्किक कारणहरूले गर्दा, समान खरीदको वस्तुहरू कहिलेकाँही फरक प्याकेजहरूमा पठाइन्छ, यदि तपाईंले संयुक्त शिपिंग तोक्नुभएको छ भने पनि।
तपाईं कुनै पनि अन्य प्रश्न छ भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई बाहिर मदत गर्न हाम्रो सबै भन्दा राम्रो हुनेछ।